"- Silindele kokuquleka Raider!"
Kuleli esabekayo uMnu Valeriy Viktorovich uChumak lixwayisa yemfanelo ayiphathisiwe yithimba ngesikhathi ubunzima umqondisi mzuzu inkampani GP "NPK Electric esitimela" (NPO DEVZ) lapho izinkinga ezithile, empeleni, ukusongela kuye uqobo.
Ngakho kwaba ngemva ihhovisi lomshushisi ukuvimbela endaweni Yobugebengu Economic kokwenziwe lobugebengu ukudayisa ezibizayo amandla transformer PE "Ifilosofi esitheni isakhiwo sokuhlala esisha" ngenani okungukuthi iphindaphindeke izindleko phansi kunabaphostoli ngisho Scrap. Umqondisi PE liphinde wamabhuku ezimali, kusukela ngo-Agasti kulo nyaka, akusho ukuqhuba noma yimuphi umsebenzi futhi bafuna.
Ngaphambi ukudayiswa, njengoba kwasho ukuphathwa kwenkampani, transformer wathunyelwa "ukuhlolwa". Kuyinto idida:
Kungani afeze izivivinyo imikhiqizo okusemathinini, ongazange asebenze ukuchitha umzuzu nje owodwa?
kungani vivinyo kungukuthi eyenziwa amabhizinisi ezikhethekile (Zaporozhye transformer isitshalo, isibonelo), kanye ngokushesha amyisa ethekwini laseKhesariya, "Itheku-23" - esizeni ukuqoqa Scrap Metal?
Ngemva ekuvimbeleni isivivinyo okuthiwa kuhlulekile disassembly laqaqwa, "abahloli" usubuyelé transformer adiliza ngaphandle insulators, nge kancane tho (amathani 13!) Ekhethekile uwoyela transformer. Futhi ngenxa yomonakalo esimweni in inani ayizinkulungwane 300. Hryvnia!
Ngemva kokuba kwenzeke izenzakalo Mphathi ashaye iqoqo omkhulu futhi ngaphandle ngichaze izizathu collective, afeze inqubo "ukusabisa ngokungakhethi" - Ufaka umbani yokufutheka labo esolwa "Anezinhlaka", enika abantu ukuba baqonde ukuthi yini kungase kuthathe ezandleni zakho zokuphila, futhi zonke okwenzekayo emhlabeni - lena omunye umzamo ukuze Raider bamba isitshalo. Bembuza ekupheleni kusikisela ukuthi imizamo "kwethuka" lutho, ngoba "ukwesekwa kumibuthano eliphakeme."
Isihlobo engxabanweni labalulekile eluLwimi "Ukuvikelwa yaso." Ubani nje omunye ngaphandle uMnu uChumak VV yaziwa ngokuthi amasu isimo ibhizinisi asikwazi ethumba ngokomthetho! Akumangalisi ukuthi iqhawe lethu ikomidi idolobha yokulwisana zahlasela ukuhlupheka. Futhi uma wonke efanayo mina nesibindi ukuveza amaphupho amabi, lapho uthwebula "Martians", hhayi ukuletha abafowabo ukucindezeleka - ikomidi lakho ngeke ngigodle isisu sakhe ukuze azivikele iphupho sophikisana sika.
Incazelo Nightmares uMnu Valery Viktorovich uChumak ubona konke kuphela isifiso sibambelele siqinise yiNhloko emkhunjini ocwilayo, futhi musa nimyeke ahambe, ngisho nezikhathi kamunyu. Ngenxa yokuthi inkampani kahulumeni libona iminyaka eminingi njengoba impahla yomuntu, njengedolobha emkhombeni, ngaphandle okuyinto ukuphila yena akusho bacabange. Ukusebenzisa zonke iziyisikhombisa, ezifana kokufaneleka kusolwa, uxhumano eziyihlazo, izinsongo kanye nezinsiza ingajezisa zokuphatha.
"- Omunye umzamo ukuze uthwebule!" - futhi bahlabe umkhosi V uChumak, kanti abanye bazama ukuthola imbangela. Isizathu salokhu kwaba isimo ukuhlolwa intela inkonzo kwezezimali 4 Novemba 2011. Ukusebenzisa izinsizakalo "ukulwa amapheshana" yakhe, uzama ukufaka emlonyeni ummeli ithimba wazibonela astray ukushaya isimo kokuhlola emthethweni futhi elingenamthetho!
Yavela isikhathi nje sekuyisikhathi "isenzakalo esibaluleke kunazo zonke simila" - ". Main umshayeli wakhe" esenzeka ngalo Wobudlelwano Inkazimulo Lizwakalise ephrintiwe wakhe - iphephandaba "Elektrovozobudivnik" - zingawuhawukeli emapheshana zabo ezinyathelisiwe, ayigcwalisa i uthukuthele ngokukhuza iviyo umlomo umhleli nezinkumbulo lyrical "ka Machinist ezibizayo."
Abazithobayo engena isimo abasebenzi abaku- umsebenzi phesheya, baye kubo bonke kuqashelwe ukuthi izinga lomsebenzi, abantu ikhanda ayinqunywa izinkulumo akhe anjengamalangabi omlilo, imiklomelo kungukuthi efakwe ohlwini hhayi vernissage lezithombe hero, sizungezwe nezicukuthwane. Quality - kuba izinkomba Injongo (izibalo, izibikezelo namagrafu), efanekisa ukusebenza komsebenzi isikhathi futhi isikhala esizayo.
Ngezinye 'umagazini weminyaka' imichilo ezine iphephandaba kwemboni, singakaze simbone enamadijithi eyodwa, usiqinisekisa ukusebenza zomsebenzi izimpumelelo isikali eminyaka ezandulela "iminyaka engu-ekhazimulayo." Kwakungekho igama elilodwa mayelana sesimanje kanye ukunwetshwa ukukhiqizwa, futhi ufunde mayelana ukhulisa izimali ngoba ukuqaliswa ubuchwepheshe eziphambili, okhulayo ncwadi ukuze futhi umthamo wokuthengisa, emisebenzi futhi ehloniphekile zokusebenza amaholo. Ngoba ukukhuluma izinkomba ezinjalo akuyona!
Ephambi kwezinduna ibhizinisi nengqalasizinda ucwaningo enamandla kanye nentuthuko esiyingqayizivele emkhakheni empahla, Valeriy Viktorovich uChumak akasebenzisi le nsiza enamandla amashumi eminyaka hhayi ukutshala ngcono futhi kokuqeda prototypes of imishini entsha ukuze babe sezingeni leliphakeme nokuncintisana.
Sula Eveza ubufakazi balokhu, njengoba siye okukhulunywe ngaye ekuqaleni - ahlanganisa imigwaqo emikhulu amakhanda zikagesi, ogama ukukhiqizwa ngesikhathi isitshalo lwaluqala ezikude 1995. Isidingo wabo ezikhulayo minyaka yonke. Lesi sitshalo kufanele uke igcwaliswe ucwaningo nentuthuko "Kufikani engqondweni", bese umkhiqizo ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe.
Umqondisi wakhetha inkambo ehlukile - indlela eyayenziwe eziyihaba izindleko nezinye izimpahla (by imali e hardware ebizayo) futhi ukucinga kungenzeka izinhlelo ayibikwa isitshalo. Futhi ngenxa - ukulahlekelwa kudala kahle ezimakethe.
Njengoba eseduze umakhelwane abangaba amakhasimende - Ukuphathwa Dnieper ujantshi - waphoqeleka ukuba asayine isivumelwano ukuthengwa 130 amakhanda zikagesi e Tbilisi.
Esinye isibonelo salokhu kwanele ukucabanga ivolumu kwamanye amazwe ukulahlekelwa kuzona edolobheni, ifektri kanye nezwe.
Ngezinga elingakanani kungaba eyodwa esiqiniseka ndaba zalutho ukuzidla okumele ukwethula izinhloko Dnipropetrovsk esifundeni, wemboni nezwe, abashisekeli yezenzo zakhe nefarious esidlangalaleni?
Valery Viktorovich uChumak eminingi isipiliyoni ekwakhiweni le "Potemkin nemizana". Kodwa asingabazi ukuthi labo abaphathiswe isiphetho ngabantu kanye namazwe ukuthola enolaka ukuthuthukiswa iziyisikhombisa containment uhlelo wamabhizinisi amasu endaweni, bakwazi kalula ukuba sihlukanise ukolweni emakhobeni.
Ukulungiselela ubusika: ukusika izidakamizwa emva kwe-fruiting
Daria Razumikhin: izithombe, biography, empilweni yakho
Ukwelashwa phesheya. Zokwelapha Ezokungcebeleka Austria.
Kuyini isinambuzane esisheshayo zonke emhlabeni?